KXStudio: The Distro ho an'ny Professional Audio Producers | Avy amin'ny Linux
Ao amin'ny tontolon'ny Linux dia misy disto ho an'ny tsirony sy ny filàna rehetra, noho izany dia mety foana ny mitady iray izay mifanaraka amin'ny tsiro sy ny laharam-pahamehanao, amin'ny fiheverana fa misy distro azo ovaina mba hitondra tena sy hanana ny fampiasa izay irinao.
ny mpamokatra feo matihanina manana eo am-pelatanan'izy ireo distro antsoina hoe KXStudio izay tonga miaraka amin'ny rindrambaiko manokana amin'ity faritra ity, ary koa ny fanatsarana ny rafitra mba hahatonga ny fanovana audio ho mahafinaritra sy mahomby kokoa.
1 Inona ny KXStudio?
2 Endri-javatra KXStudio
Inona ny KXStudio?
KXStudio Distro somary matotra io bnatsatsika tamin'ny Ubuntu 14.04.5 LTS, izay mifantoka amin'ny famokarana feo matihanina, ity distro ity dia manana fitaovana lehibe fanangonana apps sy plugins hahafahanao manitsy na mamokatra audio amin'ny fenitra indostrialy avo indrindra.
KXStudio dia hevitra tanteraka, izay misy ny fifantina Fampiharana manokana sy antoko fahatelo manokana amin'ny fitantanana feo, nampiana a karazana plugins open source hanatsarana ny fampisehoana audio ao amin'ny kernel Linux ary a foibe fitahirizana ho an'i Debian / Ubuntu izay toerana itahirizana ireo fangatahana vaovao. Izany no antony ahazoana mankafy ny KXStudio ho distro miompana amin'ny rehetra, na toy ny trano fitahirizana azo apetraka amin'ny distro tianao indrindra mba hamenoana ireo rindranasa mifandraika amin'ny famokarana feo.
Toy izany koa, KXStudio manana fanohanana lehibe amin'ny famokarana audiovisual izy, manana amin'ny alàlan'ny fampiharana tsy miovaova ho an'ny fanovana horonantsary, famokarana audiovisual ary fanatsarana kernel hampitomboana ny fahombiazan'ny fizotran'ny fanangonana.
Ny interface tsara an'ny KXStudio distro dia tena tsara miaraka amin'ny famaranana natao hampifanoherana ireo rindran-kira, ny tontolon'ny birao ampiasaina dia ny KDE ary ny distro installer dia tena mahaliana.
Distro miorina amin'ny Ubuntu 14.04.5 LTS amin'ny Tontolon'ny birao KDE.
Izy io dia manana andiana fampiharana sy plug-in ho an'ny famokarana feo sy horonan-tsary matihanina.
Ny fanatsarana ny seranan-tsambo Linux sy ny fampidirana ireo patches ho an'ny asa tsara kokoa, mba hampitomboana ihany koa ny mifanentana amin'ireo asa maro hafa.
Repository ho an'ny fiarahamonina manana ny toerany ho an'ny Debian sy Ubuntu, miaraka amin'ireo rindranasa sy plugins azo ampiasaina amin'ny distro rehetra.
Manana ireto rindrambaiko famokarana feo sy horonantsary manaraka ireto ireto: Cadence, Cadence-JackMeter, Cadence-JackSettings, Cadence-Logs, Cadence-Render, Cadence-XY Controller, Catarina, Catia, Claudia, Claudia-mpandefaary Carla, ny tsirairay amin'izy ireo dia natokana hanolotra fanatsarana sy fampiasa vaovao ho an'ny fitantanana feo, loharano misokatra rehetra ary azo alaina amin'ny disro isan-karazany.
Izy io dia mampiditra karazana plugins sy port Linux izay azo alaina avy DISTRIKA, mampitombo ny mifanentana amin'ireo fitaovana maro kokoa.
Ny tanjany dia ny sehatry ny haino aman-jery, ka ao amin'ny menio fampiharana amin'ity faritra ity no ahitanao ireo fampiharana zaraina amin'ny audio plugin, famokarana feo, fitaovana audio, famokarana kapila, fikirakirana haino aman-jery multimedia, famokarana horonantsary , Ny fisoratan'i Cadence ary ny mpandefa an'i Claudia.
Izy io dia manana rindranasa ho an'ny fampiasana ankapobeny toy ny automatisation an'ny birao, ny mpizaha, ny mpanova sary, ny mpaka sary, ny feo ary ny video, sns.
Tsy misy isalasalana, ity distro mahery ity izay manana traikefa nandritra ny taona maro dia safidy tsara ho an'ireo amateurs na ireo matihanina amin'ny fanovana feo sy horonantsary. Zava-dehibe ny manamarika fa afaka mankafy ny rindranasa sy ny add-ons koa isika KXStudio ao amin'ny distros ankafizinay indrindra noho ireo trano fitahirizany, ka na inona na inona ampiasainao dia azonao atao ny mampiasa azy io mba hamenoana sy hanampiana fiasa vaovao amin'ny fizarana tianao indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » KXStudio: The Distro ho an'ny Professional Audio Producers
eljorge21 dia hoy izy:
Efa nanandrana azy aho volana maro lasa izay. Ary tena mandeha tsara. Saingy ny teboka ratsy dia mifototra amin'ny distro izay efa taona vitsivitsy ary tsy dia nandeha tsara loatra ho ahy tamin'ny kahie maoderina kokoa. Tsy mampino ny fitaovana entin'izy ireo! Cadence, Claudia, Carla .. Na dia araka ny nolazaiko teo aza, mifototra amin'ny 14.04 dia niady mafy aho hampandeha ny Wi-Fi, izay tamin'ny 16.04 dia tsy nitranga tamiko. Fa raha tsy dia fahita firy ny laptop-nao, ary ampiasainao hamokarana mozika ... mila manandrana ianao! Ny fampiharana dia miasa voalohany, tsy misy hatak'andro, na inona na inona!
Valio amin'i eljorge21
Tsy mitovy na mitovy amin'ny Ubuntu Studio?
Tena tsara, tokony hanandrana izany ny mpitendry mozika rehetra, fa ...
Tsy nanana antsipiriany kely ianao, (na dia hita aza izany) milaza fa KDE izy, ny kernel dia Real Time (RT) toy ny ao amin'ny distro Studio rehetra satria manatsara be ny famokarana feo, ary ny RT an'ny kernel lnux dia tsara kokoa noho ny tsia RT avy amin'ny kernel MS WOS na OSX. Izy io koa dia manana plugins fampifandraisana peripheral mozika izay aretin'andoha rehefa te hametraka sy manamboatra azy ireo samirery ianao.
Mahaliana izany ... Tsy maintsy manao asa multimedia maro aho, ary mahaliana ny manandrana azy
Raha ny zavatra hitako sy tsy tiako dia ny kinova 4 an'ny KDE izay mahatsiravina mandra-pahatongan'ny tsy azo atao mihitsy
Ho an'ny ambiny, mety hanandrana azy aho
3d dia hoy izy:
Azo apetraka amin'ny milina taloha ?????
Manana milina manana ondrilahy 512 mb aho, ary mieritreritra ny hametraka Linux ao ... Angamba mety handeha.
Valiny amin'ny 3d
Fandraisana anjara tena tsara. Mampiasa OpenSUSE aho fa ampiarahiko ("amin'ny tànana") hahafahako mampiasa Jack ary mety amiko tsara izany, saingy fitaovana "nohavaozina" ("amin'ny tanana" koa, hahaha), ka ny safidy KXStudio ho an'ny fitaovana maotina kokoa tsy misy ajanony ny ho an'ny sehatry ny matihanina, heveriko fa fandraisana andraikitra lehibe izany.
Mitomany isan'andro aho namoaka distro vaovao ry zalahy KX. Mampihoron-koditra, mampidi-doza, be pitsiny ary mahasosotra foana ny feo amin'ny Linux; Tampoka teo dia nipoitra ny KXStudio ary nitondra fofona rivotra vaovao ho an'ny Linux ny fitaovany, saingy aza faly, ny canonika sy ny orinasa dia efa mametraka sakana amin'ny fitehirizam-bokin'ny KX
amin'ny fossa mifantoka dia tsy mandeha tsara ny zavatra
ary ny feo indray dia gadona mahatsiravina
Aza hadino ny Linux, tsara ho an'ny birao, mijery sarimihetsika, manamarina mailaka, manoratra taratasy
Ho an'ny zavatra hafa rehetra, tsy misy loko, ny varavarankely, na eo aza ny faniriana mba handefasantsika rehetra any amin'ireo any redmond a la m….